Ogaden News Agency (ONA) – Macaluul Kajirta Itoobiya & Shacabka oo Aad Urajo Xun.
Macaluul Kajirta Itoobiya & Shacabka oo Aad Urajo Xun.
Wararka naga soo gaadhaya wadanka Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya in abaarihii wadanka kuhabsaday ay isubadaleen macaluul, sida xogta aan kuhelayno in kabadan 8.5 milyan oo shacabka gumaysiga kuhoos jira ah ayay saameeyeen abaarahu.
Warka ayaa intaas kudaraya in albaabada laysugu dhuftay Iskuulo aad ubadan oo ay dadka danyarta ah wax kabaran jireen, kuwaas oo sida lasheegayo dadkii wax kabaran jiray ay uhayaameen magaalooyinka waawayn ee wadanka.
Dhinaca kale waxaa mar qudh ah isla qaylyay hay’adaha caalamiga ah iyo wadamada deeqda bixiya kuwaas oo sheegay in lacagihii ay bixiyeen aan lasiinin dadka shacabka ah ee kutabaalaysan wadanka gudihiisa, midkamid ah shaqaalaha hay’adaha oo saxaafada uwaramay ayaa sheegay in ay bixiyeen malaayiin lacag ah oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka tabaalaysan, balse sargaalka ayaa sheegay in aan lacagahaas lagaadhsiinin shacabka.
Sido kale waxaa arinta baasiin kusii shubaya kacdoonada wadanka kasocda kuwaas oo saameeyay dhamaan isusocodkii iyo ganacsigii shacabka, iyo waliba kaalmadii bini’aadam nimo ee hay’aduhu ay gaadhsiin jireen shacabka.
Dhinaca kale waxaa guud ahaan wadanka kajira sicir barar 10% ah waxaana cirka isku shareeray ashcaartii raashinka iyo adeegyada kale ee muhiimka ah, arintan ayaa timid kadib markay istaageen baabuurtii ganacsatada ee ka imaan jiray dakadaha Barbara iyo Jabuuti.
Sidoo kale waxaa guud ahaan wadanka sanado badan saaraa cunaqabatayn dhinaca ganacsiga iyo dhaqaalaha ah, taas oo xukuumada wayaanuhu ay kudoonayso in ay kuwiiqdo awooda jabhadaha hubaysan isla markaana ay kudoonayso in uu shacabku si buuxda usoo galo gacanteeda.